Matongerwo eNyika, 27 Kurume 2018
Chipiri 27 Kurume 2018
VaMnangagwa Vopeta Musangano kuIvory Coast, Votarisirwa Kuenda kuChina
Vachitauta nevatori venhau pakapera musangano uyu, VaMnangagwa vakati vatungamiri venyika dzemuAfrica vanofanira kusimbisa nyaya dzezvehupfumi kwete zvematongero enyika.
Mhuri yaVaDzamara neSangano reCrisis In Zimbabwe Coalition Voshamisika NeKutsvagwa Kwavo Kwapera Makore Matatu
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti rakatyamadzwa zvikuru nemashoko emapurisa ekuti vave kuda kutanga kutsvaga kwakaenda murwiri wekodzero dzevanhu VaItai Dzamara vakatsakatika makore matatu apfuura.
Masangano Akazvimirira Okurudzira VaMnanagwa Kuvandudza Hwaro hweSarudzo seZvavakatenderana neVamwe Vatungamiri
Masangano anoshanda akazvimirira arumbidza mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nekubvuma kuti Zimbabwe icherechedze hwaro hwesarudzo weAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance.
Varairidzi vanga vachisvika zana vaungana pamahofisi esangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association paatanga kuratidzira akatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi “Musatitambirise mutero wembwa.”
Madzishe ekuChiredzi Anoramba Kuti Ari Kumanikidza Vanhu Kutsigira Zanu PF
Madzishe ekuChiredzi anoti haaite zvekumanimidza vanhu kuti vatsigire Zanu PF, kunyangwe hazvo mutungamiriri wemadzishe, Ishe Fortune Charumbira, vakabuda pachena kuti madzishe achashanda nebato riri kunotonga kuti vagari vekumaruwa varitsigire pasarudzo dzegore rino.
Kuonekwa kweMauto mumaMisha Munguva dzeSarudzo Kwotyisa Vagari vekwaZvimba
Vagari vekwaZvimba vanoti havasi kufara nemasoja ari kungombeya mavanogara nenzvimbo dzekutandarira.
Mapurisa Obuda Pachena Kekutanga Kuti ari Kutsvaga Kuna VaItai Dzamara
Mapurisa anoti ari kukurudzira veruzhinji vangadai vaine ruzivo nekune murwiri wekodzero dzevanhu, VaItai Dzamara, avo vakapambwa musi wa 9 Kurume muna 2015, nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori.